यद्यपि हामी सँधै सुरक्षा र नियमहरूको साथ शुरू गर्दछौं, बिभिन्न मानदण्डहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ जब हामी अनलाइन अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं। जे भए पनि, यदि त्यहाँ खेल विविधता छैन र अपरेटरको प्लेटफर्महरू विश्वासिला छैनन् भने, के हामी क्यासिनोलाई तपाईंको समयको योग्य मान्न सक्छौं? भुक्तानी विधिहरू पनि विश्लेषण गर्नुपर्दछ, साथसाथै गो गोमा खेल्ने फ्यानहरूको लागि मोबाइल अनुप्रयोगहरूको उपलब्धता। यी र अन्य धेरै कारकहरू अवलोकन गरिएका थिए र अन्तमा हामी बेलारुसको सर्वश्रेष्ठ अनलाइन क्यासिनोको समापनको साथ अघि बढ्यौं। यद्यपि तलको तालिकामा शीर्ष सुझावहरू जाँच गरौं।
हामी शीर्ष बेलारूस जुवा साइटहरूको सूचीको साथ चीजहरू लात हान्न चाहन्छौं। यदि तपाईं अहिले अनलाइन जुवामा डुबुल्की मार्न तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईं तल हाम्रो सिफारिशहरू मध्ये एकमा खेल्न चाहानुहुन्छ। हामी एक विस्तृत चयन प्रक्रियाको माध्यम बाट ग which्यौं जसले हामीलाई बेलारूसी खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिहरूको रूपमा यी सुझावहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्‍यो। तलको पठन जारी राख्नुहोस् यदि तपाईं हामी कसरी यो सूचीको साथ आए भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने।
शीर्ष १० बेलारूसी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० बेलारूसी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
बेलारस व्यापक रूपमा ग्रह मा परिचित छ यद्यपि यो युरोप मा कान्छो स्वतन्त्र देशहरु को एक हो। यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय पर्यटकीय आकर्षणहरू मध्ये डब्ल्यूडब्ल्यूआईआई-द्वारा प्रेरित महान् देशभक्त युगको संग्रहालय, रूखहरू, भव्य ब्यारेकेट्स, स्टालनिस्ट साम्राज्य आर्किटेक्चर, रेड चर्च (सेन्ट्स सिमन्स र हेलेनाको चर्च), केजीबी हेडक्वार्टर र बहु-शैलीकृत प्राचीन शहरहरू छन्। नेस्विज र मीर शहरहरूमा पुरानो महल परिसरहरू।
देशका सबै ऐतिहासिक र पर्यटक आकर्षणहरूको शीर्षमा, बेलारूसलाई सामान्यतया "सोभियतोत्तर उत्तर लस भेगास" भनेर चिनिन्छ। यो एक उत्कृष्ट मौसम, प्रचुर गतिविधि, र विश्व स्तरीय सुविधाहरु संग एक जुवा उद्योग प्रदान गर्दछ।
बेलारूसमा क्यासिनोहरूको सूची
तल बेलारूसका क्षेत्रहरूमा हाल सञ्चालित सबै क्यासिनोहरूको सूची छ।
BigZ राजकुमारी क्यासिनो (र BigZZ राजकुमारी स्लट हल)
क्यासिनो एडमिरल १
क्यासिनो एडमिरल - गोमेल
क्यासिनो प्यालेस - क्लब जिओ पेपे
क्यासिनो रोयल - मिन्स्क
क्यासिनो टोर्नाडो मिन्स्क
क्यासिनो XO क्लब मिन्स्क
क्लब-क्यासिनो बेलया भेजा
हीरा राजकुमारी क्यासिनो
लालित्य राजकुमारी क्यासिनो
होटल युबिलेनी र क्यासिनो युबिलेनोइ
जुराविन्का राजकुमारी क्यासिनो
काजिनो विक्टोरिया चेरी (भिक्टोरिया चेरी क्यासिनो)
मिराज क्यासिनो - मिन्स्क
नेमिगा राजकुमारी क्यासिनो
पोकर क्लब क्यासिनो एएमजी
शान्ग्री-ला क्यासिनो मिन्स्क
बेलारूसमा क्यासिनोको इतिहास
बेलारुसमा पहिलो खेल र जुवाको ट्रिगर निर्धारित गर्न असम्भव छ, जस्तै अल्बानियाको मामलामा। सर्वप्रथम बेलारुसको इतिहासलाई आधिकारिक शक्ति एक अधिकारीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गरिएको छ। रूसी साम्राज्य, लिथुआनियाको ग्रान्ड डची, पोलोत्स्कको प्रिन्सिपलि र पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल।
यस क्षेत्रले रूसबाट स्वतन्त्रता पाउनु र सोभियत समाजवादी गणतन्त्र बन्नु अघि विभिन्न पटक, जुवा - कडा निषेधित भए पनि - देखा पर्न थालिसकेको थियो। यो १ th औं शताब्दीमा गेडुकेविच नामक एक उच्च-ज्येष्ठ व्यापारीले पहिलो क्यासिनोको सिर्जनाबाट सुरू गरे। मिन्स्कमा आधारित क्यासिनो उच्च-वर्गका नागरिकहरूलाई भेट्न, खाना र जुवा खेल्नको लागि एक विशेष घरको रूपमा बढी थियो। त्यहाँ धेरै स्थानीय कार्ड खेलहरू प्लेयरहरूको स्वाद लिनका लागि उपलब्ध थिए तर दुर्भाग्यवस, क्यासिनो १ 19 s० को दशकमा बन्द थियो।
स्वतन्त्रता पछि जुवा बढ्छ
यद्यपि, बेलारुसले सोभियत सोशलिस्ट रिपब्लिक युनियनबाट अगस्ट २ 25, १ 1991 16 १ मा स्वतन्त्रता पाएपछि देशभरी नै जुवा खेलेको थियो। सोही वर्षको अक्टोबर १ XNUMX मा बेलारसियाका मन्त्रिपरिषद्ले एउटा विधान जारी गर्‍यो जसले आंशिक रूपमा जुवा खेल्यो। यस विधानपछि अधिकारीहरूले सम्भावित क्यासिनो अपरेटरहरूलाई लाइसेन्स दिन थाले। धेरै बेलारुसका प्रथम र एकमात्र राष्ट्रपति एलेक्जान्डर ग्रिगोर्याविच लुकाशेन्कोले अन्तत: यस विधानलाई अनुमोदन गरे।
यसै आधारमा बेलारुसको स्वतन्त्रता २ December दिसंबर, १ 26 1991 १ मा स्वीकार गरियो, र बेलारस गणतन्त्रको संविधान मार्च १ 15, १ 1994 on मा स्थापित भयो। यसैले जुवा खेल्ने उद्योग विश्वमा परिचित भयो, ब्यापारिक व्यक्तिले चासो जगाउन थाले, र क्षेत्रले क्षेत्रहरु मा क्रमिक परिपक्वता देखेको थियो।
यसै क्रमशः रसियाको जुवा उद्योगको केस पनि प्रस्तुत गरिएको थियो (विशेष जुवा जोनहरूको निर्माण) तर बेलारसियाका अधिकारीहरूले यस उद्योगलाई कत्ति खराब पार्छ भनेर बुझेका थिए। रुसियामा, जूवा अत्यन्तै अलग्गै छुट्टिन्छ र यो नै बेलारसमा जुवा प्रख्यात हुनुको एक कारण हो - किनकि धनी रूसीहरू र रूसी खेलाडीहरूले बेलारूसलाई क्यासिनो जुवा खेल्न मन पराउँछन्। त्यस्तै युक्रेनी खेलाडीहरूले बेलारूसी क्यासिनो पनि पत्ता लगाउँदछन् किनभने युक्रेनमा रूसको जस्तै जुवा खेल्ने क्षेत्र पनि छ।
राष्ट्रपति पद No.
यसबाहेक बेलारूसी क्षेत्रभित्रका जुवा गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले जनवरी १०, २००9मा एक राष्ट्रपति पद - डिक्री न। No. लाई अनुमोदन गरियो। एउटाका लागि, जुवा व्यवसायहरू बेलारूस गणराज्यको कर र कर्तव्य मन्त्रालयले अधिक करहरू र अधिक कठोर कर नियमहरूको अधीनमा राख्नुपर्‍यो।
यसको विपरित, कर र कर्तव्य मन्त्रालयका उपमन्त्री उलाडिजिर मुकविचले २०१, को अन्तमा भनेका थिए कि मन्त्रालयले २०१ 2017 मा क्यासिनो र स्लट मेसिन ट्याक्स घटाउने योजना बनाइरहेको छ। मे २०१ of सम्ममा अहिलेसम्म केहि भएको छैन।
कर नीति बाहेक, क्यासिनो खेलाडीहरूले उनीहरूको जितको दावी गर्न सक्षम हुनु अघि उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। डिक्री मुख्यतया त्यस समयमा मुलुकमा मनी लान्ड्रिंगको पुनरावृत्ति भएका केसहरूसँग लड्न पारित गरिएको थियो तर अन्य क्षेत्रलाई पनि छुनुपर्‍यो।
क्यासिनो इजाजतपत्र र नियमहरू
इजाजतपत्र र नियमहरूको पालना गर्दै, बेलारस गणतन्त्रको खेलकुद र पर्यटन मन्त्रालयले कुनै पनि जुवा सुविधा सञ्चालन गर्नु अघि कानुनी संस्था र सक्षम व्यक्ति दुबै विशेष अनुमति दिन्छ। इजाजतपत्र नियम १ No.1377 को अधीनमा छ जुन बेलारुस गणतन्त्रका मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद्ले जनवरी २०, २०० 20 मा पारित गरेको थियो, राष्ट्रपति पदले जुन सोही वर्षको जुलाई १ 2003 मा अनुमोदित भएको थियो र सेप्टेम्बर १, २०१० को डिक्री 14० लाई अनुमोदन गरियो।
कानूनका यी टुक्राहरूका अनुसार बेलारुसमा चार किसिमका कानुनी जुवा सुविधाहरू मात्र रहेका छन्: क्यासिनो, स्लट मेसिनसहित हल, स्वीपस्टेक्स / चिठ्ठा, र बुकमेकरहरू। तसर्थ, केवल स्लट मेसिन, टेबल खेलहरू, खेल सट्टेबाजी, र स्वीपटेक्सहरू मात्र करहरूको अधीनमा हुन्छन्। यस सुविधामा करहरू पनि समावेश छन् जुन प्रत्येक महिना गणना गरिन्छ।
क्यासिनोहरूले गेमि table तालिकाको स्थिति र स्थानमा निर्भर गर्दै प्रति गेम तालिका २,2,500०० देखि € ,4,000००० सम्म भुक्तान गर्दछ। स्लट मेसिनहरूमा करहरू € to० देखि १०० डलर सम्मका हुन्छन् जबकि सट्टेबाज र टोट्स १ pay० देखि १€०० सम्ममा भुक्तान गर्छन्।
जुवा सुविधाहरूको बारेमा, होटल युबिलेनीले १ 1992 1980 २ मा पहिलो वर्तमान क्यासिनो खोले: क्यासिनो युबिलेनोइ। क्यासिनो भन्दा पहिले, १ XNUMX s० को दशकमा प्राय: शपिंग मल्लमा अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न स्लट मेशिनहरू जडान गरिएको थियो।
बेलारुसमा कहिल्यै खोल्न सकिने सब भन्दा पुरानो क्यासिनो डानकोफ क्लब क्यासिनो थियो। गुगलमा देखिएझैं क्यासिनो स्थायी रूपमा बन्द छन् तर सटीक बाहिर निस्किने मिति प्रकट गरिएको छैन। क्यासिनोको फेसबुक पृष्ठमा अन्तिम पोस्ट जनवरी,, २०१3मा प्रकाशित गरिएको थियो - तर यसको विपरित, वेबसाइट dankoffclub.by मार्च २०१ of सम्म अझै सक्रिय छ। यद्यपि क्यासिनोले नौ टेबल खेलहरू र sl० स्लट मेशिनहरू प्रस्ताव गरेको थियो तर यसको व्यापक आलोचना भयो। एक तलको डिजाइन, शंकास्पद सेवा मानक, र अव्यावसायिक कर्मचारीको लागि।
अन्य क्यासिनो ढिलोमा आए जब डानकफ क्लब क्यासिनो र क्यासिनो युबिलेनोइले विशेष वर्षको लागि बेलारुसमा संचालित गरे। तेस्रो क्यासिनो खोल्नको लागि पर्याप्त असम्भव छ किनकि सबै बेलारूसी क्यासिनोहरूका वेबसाइटहरूको आवश्यक जानकारीको अभाव छ।
आज, त्यहाँ धेरै क्यासिनोहरू ,०,१80,153 वर्ग माईलमा फैलिएका छन्, ल्याण्ड लक भएका देश र सब भन्दा चाखलाग्दो अंश पॉलीओपोलि हो। अधिकांश देशहरू जस्तो नभई जहाँ केवल मुट्ठीभर जुवा कम्पनीहरू वा उद्यमीहरूसँग जुवा उद्योगको ठूलो प्रतिशत स्वामित्व हुन्छ र संचालन गर्दछ, बेलारूसी क्यासिनोहरूको स्वामित्व राखिन्छ र अपरेटर्सहरूको एक धेरै सेटबाट संचालित हुन्छ।
शीर्ष १० बेलारूसी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 8, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० बेलारूसी अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० बेलारूसी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 बेलारूसमा क्यासिनोहरूको सूची
3 बेलारूसमा क्यासिनोको इतिहास
4 स्वतन्त्रता पछि जुवा बढ्छ
5 राष्ट्रपति पद No.
6 क्यासिनो इजाजतपत्र र नियमहरू
नि: शुल्क खेल गाइडहरू
शीर्ष १० बेलारूसी अनलाइन ...